တစ်နေ့တစ်၌ ယောက်ျားပျိုတစ်ယောက်သည် သူ၏ညာဘက် testis ရှိရာကပ်ပယ်အပြင်တွင် စိမ်းနေ၍ ဆရာဝန်သွားပြ၏။
ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ ထပ်ခွဲထုတ်ခိုင်းသဖြင့် ခွဲထုတ်လိုက်ရသည်။
နောက်တစ်လခန့်....ကြာသော်..... အမျိုးသား အင်္ဂါ ပါထပ်စိမ်းလာသောအခါဆရာဝန်ထံသို့....ထပ်သွားပြသည်။ဆရာဝန်က......
" အသက်အန္တရယ်မစိုးရိမ်ရအောင်ဖြတ်လိုက်ပါ " ဆိုသဖြင့်.....
ယောက်ျားပျိုလဲ ယူကျုံးမရဖြစ်ကာ နောက်ဆုံးလှီး ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရတော့သည် ။
ဖြတ်ထုတ်ပီး....နောက်ထပ်တစ်ပတ်ခန့် တွင်မူ သူ့ ပေါင်ခြံ တစ်ပြင် လုံးစိမ်းလာပြန်လေ၏။
ထိုအခါ ဆရာဝန်က ထပ်မံ သေချာ စစ်ဆေး၏။..ထို့နောက်....ဖြေးဖြေးချင်း ပြောလိုက်တာက....
" အတွင်းခံလဲလိုက်တော့ငါ့ညီ.....ငါ့ညီအတွင်းခံအရောင်ကျွတ်နေပြီ ..." ဟူ၏။
မြန်မာ ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် မ' တည်ငွေရင်းနှင့် ကနဦး ထည့်ဝင်ရမည့် ငွေပမာဏ သတ်မှတ်ချက်များအား ဖြေလျှော့ပေးခြင်း
သျှမ်း/မြောက်ဒေသခံများ ရရန်ကျန်သည့် ပိုက်လိုင်းသိမ်းပိုက်မြေလျော်ကြေး ဆက်လက်တောင်းဆို
တရုတ်ဂက်စ်နှင့်ရေနံစိမ်းပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းရေးစီမံကိန်းစတင်ကတည်းက နမ္မတူမြို့နယ်အတွင်းသတ်မှတ် ဧရိယာထက်ပို၍ သိမ်းပိုက်ထားသည့် လယ် ယာခြံမြေများ နစ်နာကြေးအတွက်ဆက်လက် တောင်းဆိုသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့နယ် ဆိုက်ခေါင်အုပ်စုအတွင်း ဖြတ်သန်းသည့် ဂက်စ်နှင့်ရေနံပိုက်လိုင်း အတွက် သိမ်းပိုက်မြေဆုံးရှုံးခ အပြည့်အ၀ မရသေးကြောင်း၊ မိမိနစ်နာဆုံးရှုံးခများ ပြန်လည်ရရှိရန် သျှမ်းပြည်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုသော်လည်း မရသေးဟုဆိုသည်။
“အမှန်တော့ ပိုက်လိုင်းဧရိယာက ၃၀ မီတာ အတွက်ဘဲ သိမ်းမယ်လို့ပြောတယ်။ တကယ်လာသိမ်းတော့ မက ဘူး၊ တချို့နေရာမှာ မီတာ ၅၀ ကနေ မီတာ ၁၀၀ အထိတောင် သိမ်းထားတယ်” - ဟု ဆိုက်ခေါင်အုပ်စု သား စိုင်းခမ်းခင်က ပြောသည်။
ဒေသခံများသည် ဂက်စ်နှင့် ပိုက်လိုင်းဧရိယာအတွက် သိမ်းပိုက်ခံထားရသည့် မီတာ ၃၀ အတွက်ပေးလျော် ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မီတာ ၃၀ ထက်ကျော်လွန်သည့် အသုံးပြုခံမြေဧရိယာများအတွက် သုံးနှစ်စာ (အပင်ဖိုး) လျော်ကြေး တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသက်လွင် ဆီကို သွားပြောတယ်။ သူက စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက အဲဒီ လောက်ပဲချပေးတယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒီလျော်ကြေးပမာဏက ရွာသားတွေလိုတဲ့ နှုန်းထားထက် မတရား နည်းနေတယ်။ ဒါကြောင့် အရင်က ပေးတဲ့နှုန်းထားအတိုင်းပြန်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။ မပေးရင် တော့ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့အဆင့် ဆက်လုပ်သွားမယ် ” - ဟု ယာမြေ ဆုံးရှုံးခံသူတဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြောသည်။
ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းပြီးစီးပြီး ယခုနှစ် (၂၀၁၃) ဂျွန်လကုန်ပိုင်းက ရေနံ နှင့် ဂက်စ်များ စတင်ပို့လွှတ်နေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းစတင်ကတည်းက သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်း၊ နမ္မတူ၊ သီပေါ၊ ကျောက်မဲ၊ နောင်ချို နှင့် ပြင်ဦးလွင် အပါအဝင် ၆ မြို့နယ်ရှိ လယ်မြေ ဧက ၂၀၀၀ ကျော် ၊ သစ်တောနှင့် ဥယျဉ်ခြံမြေ၊ ကျွဲနွားစားကျက် မြေတို့ကို ဖြတ်သန်းသွားသဖြင့် ဒေသခံများစွာနစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့၏။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ စီမံကိန်းလမ်းကြောင်း တလျှောက် မြေတူးစက်ဖြင့် ထိုးဖျက်ခြင်း၊ မြေများစုပုံခြင်း၊ ရေလမ်း ကြောင်းများ ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် ပိုက် လိုင်း သတ်မှတ်နယ်မြေ ပေ ၁၀၀ ကိုကျော်၍ ပတ်ဝန်းကျင်အနီးရှိ သီးနှံခြံမြေများ ပျက်စီး ကြရသည် ဟု လယ်သမားများကပြောပါသည်။
ရွှေဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းသည် တရုတ်အမျိုးသားရေနံ ကော်ပိုရေးရှင်း(CNPC) နှင့် မြန်မာ့ရေနံနှင့် ဓါတ်ငွေ့ရောင်းဝယ် ရေး (MOGE) တို့ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ မြန်မာအစိုးရမှ တရုတ်ပြည်သို့ အနှစ် ၃၀ ကျော်ကြာ ဓါတ်ငွေ့ နှင့် ရေနံစိမ်းရောင်းဝယ်မှု အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂၉ ဘီလီယံ လက်ကျန်အမြတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
လေးဖြူ ဒိုင်ယာရီ - lay phyu diary (listen or download)
news_lktpytk_htet-aung-phyoဝရန်တာပေါ် ထွက်ထိုင်ပြီး ဆန္ဒပြနေကြသော အလုပ်သမားများကို တွေ့ရစဉ်
အလုပ်ချိန်အဖြစ် နံနက် ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ်မှ ည ၇ နာရီအထိ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရပြီး ပုံမှန်အချိန်ပို အလုပ်ချိန်အဖြစ် ည ၉ နာရီ အထိ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရကြောင်း၊ အော်ဒါအပေါ် မူတည်ကာ တစ်ခါတစ်ရံ ည ၁၁ နာရီ အထိ အလုပ် လုပ်ကိုင်ရသော်လည်း လုပ်သားတစ်ဦး၏ တစ်လစာ လုပ်အားခမှာ ကျပ်ရှစ်သောင်းသာ ရရှိသဖြင့် လုပ်အားခ တိုးပေးရန် ဆန္ဒပြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆန္ဒပြ လုပ်သားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယင်း တောင်းဆိုမှုများကို ရရှိရေးအတွက် အငြင်းပွားမှု ညှိနှိုင်း ဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့သို့ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် တင်ပြထားကြောင်း ဆန္ဒပြ လုပ်သားများထံမှ သိရှိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကွန်း အထည်ချုပ်စက်ရုံ မန်နေဂျာထံသို့ လူကိုယ်တိုင် သွားရောက် မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း အလုပ်မအားသေး၍ ပြန်လည် မဖြေနိုင်သေးကြောင်း စက်ရုံလုံခြုံရေးမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် ပြောဆိုသည်။
သူဌေး ..... "မင်းသုံးနေတဲ့ကွန်ပြူတာက ကုမ္ပဏီက ကွန်ပြူတာပါ။ ဒီကွန်ပြူတာမှာ မင်းရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ မသိမ်းထားပါနဲ့။ မင်းမိန်းမဓာတ်ပုံ၊ မင်းကလေးဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း မသိမ်းထားပါနဲ့။ ဒီဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး မင်းကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ဘူး"
ဝန်ထမ်း..... "ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော့်အိမ်ကကွန်ပြူတာနဲ့ ခင်ဗျားအလုပ်တွေကို မလုပ်ခိုင်းနဲ့။ မီတာအတက်တော့ ကျွန်တော်မခံဘူး။ ရုံးချိန်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်လက်ထိပ်တွေ ပိုလို့တောင် အပွန်းမခံနိုင်ဘူး"
သူဌေး........ "ရုံးချိန်အတွင်း မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေကို မလုပ်ပါနဲ့။ ဥပမာ- လက်သည်းညှပ်တာတို့၊ ဆံပင်ဖြီးတာတို့... "
ဝန်ထမ်း ..... "ကျွန်တော်လည်း ခင်ဗျားကိုပြောချင်တယ်။ ရုံးချိန်အတွင်း ကျွန်တော်ဖြီးလိုက်တဲ့ဆံပင်၊ ညှပ်လိုက်တဲ့ လက်သည်းတွေဟာ ကျွန်တော်ရုံးတက်နေတုန်း ရှည်ထွက်လာတဲ့အရာတွေပါ"
သူဌေး..... "ရုံးချိန်အတွင်း ရုံးဖုန်းကိုသုံးပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မပြောပါနဲ့"
ဝန်ထမ်း..... "ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော်အိမ်မှာ အနားယူနေတုန်း ခင်ဗျားဆက်လာတဲ့ဖုန်းကိုလည်း ကျွန်တော်မကိုင်ဘူး"
သူဌေး.... "ကုမ္ပဏီက သုံးဖို့ပေးတဲ့ကားက ကုမ္ပဏီကိစ္စအတွက်သုံးဖို့ပဲ။ မင်းလျှောက်စီး၊ လျှောက်မောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး"
ဝန်ထမ်း.... "ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို ဖိနပ်အသစ်တရံပေးပါ။ ကုမ္ပဏီကားကို ဂီယာနင်းတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ဖိနပ်ပွန်းသွားမှာ စိုးလို့ပါ..."
မေး ။ကျွှန်တော်တို့ ဘက်ကမီးမှန်ဘူး ။UPSကလဲသိပ်မကောင်းတော့မီးပျက်ချိန်ကွန်ပျူတာမြန်မြန်ပိတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ဖြေ ။ upsနဲ့ ကွန်ပျူတာသွယ်တားတဲ့ပလပ်ကိုချက်ချင်းဆွဲဖြုတ်ပါ။ချက်ချင်းပိတ်သွားရစေမယ်
မေး။ ကျွှန်တော့်window ကအဖွင့်အပိတ်ကြာနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲwindow မှာပြသနာရှိလို့ လား။
ဖြေ။ ဟုတ်ပါတယ် window ကိုအဖွင့်အပိတ်ချောင်အောင်ပတ္တာမှာဆီနဲနဲထိုးပေးပါ ။
ဖြေ။အဲ့ဒီအီးမေးကိုဖွင့်ကြည့်ပါ-သင့်စက်ထဲဗိုင်းရပ်စ်ဝင်လို့ ရှိရင်ဗိုင်းရပ်စ်ပါလို့ ပေါ့ကွယ်။
မြန်မာပြည်မှာ မြို့နယ်ပေါင်းစုံကို လှည့်လည်ပြီး တောင်းရမ်းစားသောက်တဲ့ သူတောင်းစားသားအဖနှစ် ယောက်ရှိသတဲ့။
သားဖြစ်သူက ကလေးပီပီ စူးစမ်းချင်စိတ်တွေများပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ သူတောင်းစားကြီးကို သူ သိချင်တာတွေ အမေးအမြန်းထူလေ့ရှိသတဲ့။
တခါသားမှာတော့ သားအဖနှစ်ယောက် သစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာ နားနေကြရင်း သားဖြစ်သူက သူ့အဖေကို မေး ခွန်းတွေ တရစပ် မေးလေသတဲ့။
"ဖေဖေ၊ သားတို့တွေ့တွေ့နေတဲ့ ဟို ... တိုက်ပုံအင်္ကျီအဖြူ၊ ပုဆိုးအစိမ်းဝတ်ထားတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဟင်"
"ဟို ... အင်္ကျီအဖြူ၊ ဘောင်းဘီနက်ပြာ၊ ဦးထုပ်အဖြူနဲ့ လူတွေကကော ဘယ်သူတွေလဲ ဖေဖေ"
"အင်္ကျီအစိမ်း၊ ဘောင်းဘီအစိမ်း၊ ဦးထုပ်အစိမ်းနဲ့ လူတွေကတော့ စစ်သားတွေနော် ဖေဖေ၊ ဟုတ်လား"
"အင်္ကျီအညိုရောင်၊ ဘောင်းဘီအညိုရောင်၊ ဦးထုပ်အညိုရောင်နဲ့ လူတွေက ရဲတွေလား ဖေဖေ"
အဲဒီအခါမှာ သားဖြစ်သူ ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် အဖေဖြစ်တဲ့ သူတောင်းစားကြီးဟာ အံ့သြမှင်သက်မိသွား သတဲ့။
သားဖြစ်သူ ပြောလိုက်တဲ့ စကားကတော့ …
"ဖေဖေ့ကို ကြည့်ရတာ ပင်ပန်းလို့ပါ ဖေဖေ၊ ဖေဖေလည်း သူတို့လိုဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီး တောင်းပါလား၊ အဲဒါဆို ပိုက်ဆံပိုရမှာ၊ သူတို့တွေ ပိုက်ဆံတောင်းရင် လူတွေက အများကြီးထည့်တာ သားတွေ့တယ် ဖေဖေရဲ့" တဲ့။
လူနာတစ်ယောက်ကို နပ်စ်မက အခန်းငယ်တစ်ခုဆီကိုခေါ်လာပြီး
ခြေမကိုမြင်ရင်ပြီးတာပဲမလား ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြရမယ်လို့ မဟုတ်သေးပါဘူး "
ဒီတော့ သူ့လိုပဲ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ခိုင်းခံရတဲ့ တစ်ဖက်ခန်းကလူက လှမ်းအော်ပြောတယ်......
" ခင်ဗျားကမှ ခြေမကွဲသေးတယ်၊ ကျွန်တော်ဆို ဆေးရုံဖုန်းလိုင်းပြင်ဖို့လာတာကိုဗျာ............."
တစ်ရက်တည်းနဲ့ မြန်မာတပ်နှင့် တအာင်းတပ်တို့ သုံးကြိမ်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်
29 October 2013 by Ta'ang Land
မြန်မာစစ်တပ်တို့၏ အပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်နေမှုကြောင့် အောက်တို ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တစ်ရက်တည်း တအာင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲသုံးကြိမ်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် လုံကန်ရွာနှင့်လွယ်ကျယ်လန် နားတစ်ဝိုက်တွင် အစိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှ ကွမ်လုံ-ဟိုပန်အခြေစိုက် ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်မျိုး ဦးဆောင်သော ခလရ-၁၄၃၊ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး ထွန်းထွန်းဇော်ဦးဆောင်သော ကွတ်ခိုင်အခြေစိုက် - ခရလ - ၄၅ တို့နှင့် TNLA ဘက်မှ တပ်ရင်း - ၁၁၂ တို့ တိုက်ပွဲသုံးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မြန်မာစစ်တပ်ဘက် ၃ ဦးကျဆုံးကာ ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး TNLA ဘက်မှ အထိအခိုက်မရှိကြောင်းသိရှိရသည်။
“နေ့လည် ၁၂း၀၀ နာရီမှာတစ်နာရီကြာတစ်ခါ၊ ညနေ၁း၃၀ နာရီမှ ၂း၃၀ နာရီကြား တစ်နာရီနီးပါးတစ်ကြိမ်၊ ည ၁၀း၃၀ နာရီမှ ၁၁း၀၀ နာရီ ထိတစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်ဆက်တိုက်ဖြစ်တာ၊ နောက်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ ခလရ - ၁၄၃ က တအာင်းဒေသကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ၀င်ရောက်လာတာ မရှိဘူး၊ အခုလုို ထိုးစစ်တွေဆင်လာပြီး တပ်ရင်းတိုးချဲ့ပို့ဆောင်နေတာ အရမ်းကိုသိသာထင်ရှားနေပါတယ်” လို့ TNLA အရာရှိတစ်ဦးမှ ပြောဆို ခဲ့သည်။
၁၉၉၀ ၀န်းကျင်နိုင်ငံရေးနှင့် အသံတိတ် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သမိုင်းတွင် လွတ်လပ်၊ တရားမျှတမှု အရှိဆုံး ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုအဖြစ် မဖြစ်မနေ အသိအမှတ်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်ပြီး၊ တရားမျှတခဲ့လင့်ကစား ရွေးကောက်ပွဲအလွန် နိုင်ငံရေးသည် ပါတီစုံစနစ်၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်တို့မှ သွေဖည်လာခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်နှင့် အညီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ခေါ်ယူနိုင်ရေး၊ အာဏာ လွှဲပြောင်းနိုင်ရေးတို့ကို ချောင်ထိုးခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများသည်လည်း အသံတိတ်ခဲ့ရပြီး၊ တစ်ဖက်သတ် ဖိအားပေးမှု၊ ဖိနှိပ်မှုများသာ ဆုလာဘ်အဖြစ် ရရှိခဲ့သည်။
ဒေါ်စုနှင့် အန်အယ်လ်ဒီကို လျှော့တွက်ခဲ့ခြင်း
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီကို ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သော တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီ (တစည) နှင့် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (န၀တ)တို့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(အန်အယ်လ်ဒီ)အပေါ် ပြည်သူလူထု၏ အားကိုးထောက်ခံမှုကို လျှော့တွက်ခဲ့ကြသည်။ န၀တအစိုးရ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ထိုးနှက်မှုများနှင့် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ထိန်းသိမ်းမှုတို့ကို အကြောင်းပြုလျှက် ပြည်သူလူထုသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီကို ပို၍ပို၍ ထောက်ခံလာခဲ့ပြီး န၀တအစိုးရနှင့် တစည ပါတီအပေါ် ပို၍ပို၍ မကျေမနပ် ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။
ထိုအခြေအနေတွင် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲသည် ပြည်သူလူထု၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီအပေါ် ထောက်ခံမှု၊ န၀တအစိုးရနှင့် တစည ပါတီအပေါ် ဆန့်ကျင်မှုတို့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖော်ပြနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ န၀တအစိုးရနှင့် တစညပါတီတို့၏ မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ် အကဲဖြတ် သုံးသပ်ချက် အမှားများကြောင့်လည်း တန်ပြန် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက် မကိုက်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟုလည်း သုံးသပ်နိုင်သည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မေလ ၂၇ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၉၂ နေရာ၌ တောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရရှိခဲ့မှုသည် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး ပါတီတို့ကို တောင်ပြိုကမ်းပြို အံ့သြတုန်လှုပ်စေခဲ့ပြီး ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ အနေအထား တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိစေခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူလူထုသည် နိုင်ငံရေး ခယောင်းလမ်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး ဆင်းရဲမွဲတေသထက် မွဲတေလာခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံရေးသမိုင်းကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်လျှက် နိုင်ငံရေးတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာ၊ တန်းတူရည်တူရှိသော နိုင်ငံရေးစားပွဲဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများသည်သာ . . .
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ကာလတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် တောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရရှိနိုင်ခြေ မရှိဟုလည်းကောင်း၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီတို့ ပူးပေါင်းလျှက် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရပုံစံ ဖြစ်လာနိုင်ခြေသည်သာ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု လည်းကောင်း၊ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ပြည်သူလူထု ထောက်ခံမှုသည် ထင်သလောက် မရှိနိုင်ဟု လည်းကောင်း ကြိုတင်ခန့်မှန်း သုံးသပ်ချက်များသည် တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်က သက်သေခံနေသည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်သည် န၀တ အစိုးရ အကြီးအကဲများကို စီမံချက်အသစ်တစ်ခုဆီ တွန်းပို့ခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ စီမံချက်သည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ရှောင်ကွင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေသစ်နှင့်အညီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး အဆုံးသတ်တွင် ၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို နိုင်ငံရေးအရ အသေသတ်ရေးတို့အပေါ် အခြေခံခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ န၀တအစိုးရသည် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့် တန်းတူရည်တူ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့်အပြင် နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းအရ အဖြေရှာပြီး နိုင်ငံတော်အာဏာကို လွှဲပြောင်းပေးရန်လည်း ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ အာဏာလွှဲပြောင်းရေးကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေသစ် ရေးဆွဲရေး လမ်းကြောင်းနှင့် လမ်းလွှဲခဲ့သည်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် န၀တ အစိုးရအဖွဲ့ကို နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရန် အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း၊ ဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်များကို အစိုးရအနေဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့်အပြင် န၀တ အစိုးရအနေဖြင့် အနိုင်ရပါတီကို ဂုဏ်ပြုစကား ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစကား ဆိုခဲ့သည်ဟု မှတ်ချက်ပြုနိုင်သည့် အထောက်အထားများကိုလည်း မတွေ့ရှိရပေ။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဂန္ဒီ အစည်းအဝေးကြီးကို ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဟု ခြေလှမ်း ပြင်ခဲ့သောအခါ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၉၀) ကို ဂန္ဒီ အစည်းအဝေးကြီး ကျင်းပရန် တစ်ရက်အလို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၂၇ ရက်တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကြေညာချက် အပိုဒ် ၂၀ ၌ ထို့ကြောင့် ယနေ့အခြေအနေတွင် ပြည်သူများက ရွေးကောက် တင်မြှောက်လိုက်သော ကိုယ်စားလှယ်များသည် အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲကြရန် တာဝန်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ အပိုဒ်သည် အာဏာလွှဲပြောင်းရေးကို လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမှုများကို လည်းကောင်း အပြီးတိုင် လမ်းပိတ်သွားစေမည့် အဟန့်အတား ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ကောက်ချက်ပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ယာယီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲ၍ အစိုးရဖွဲ့စည်းမည်ကိုလည်း အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကြေညာချက်အပိုဒ် ၂၁ တွင် နိုင်ငံတော် အာဏာရယူရေးအတွက် ယာယီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရေးဆွဲ၍ အစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်းကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လက်ခံနိုင်မည် မဟုတ်သည့်အပြင် ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ပါက ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယာယီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲရမည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းတို့သည် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကာလ န၀တ အစိုးရ အကြီးအကဲများ၏ ကတိစကားများနှင့် ပြောင်းပြန် ဇောက်ထိုးဖြစ်ခဲ့သည်မှာ အထင်အရှားဖြစ်သည်။
၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၂၈ ရက်နှင့် ၂၉ ရက်တို့တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ဂန္ဒီခန်းမဆောင်၌ ဂန္ဒီအစည်းအဝေးကြီးကို ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်ရေးရာ အဖြာဖြာနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ခေါ်ဆိုဖွဲ့စည်းရေး ကိစ္စအ၀၀တို့ကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လျှက် ဂန္ဒီခန်းမ ကြေညာစာတမ်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲတွင် လုံးလုံးလျားလျား အများစု အနိုင်ရရှိထားသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် နိုင်ငံတော်အတွက် လောလောဆယ် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရေရှည်အနာဂတ် အကျိုးစီးပွားများကို အခြေခံထား၍ တစ်မျိုးသားလုံး ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ပွင့်လင်းသော၊ ရိုးသားသော၊ စေတနာအပြည့်ပါသော နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်သွားရန် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သို့ အဆိုပြုချက်ကိုလည်း နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့က တစ်စုံတစ်ရာ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း မရှိခဲ့သေးပေဟု ဂန္ဒီ ကြေညာစာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် န၀တ အစိုးရသည် ဒီချုပ်၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံရေး ရှေ့ခရီးအတွက် တစ်စုံတစ်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း မရှိသည့် အထောက်အထားပင် ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ အခန်း ၂၊ ပုဒ်မ(၃)တွင် ပြဌာန်းထားသော လွှတ်တော်ကို မဲဆန္ဒနယ်များမှ ဤဥပဒေနှင့်အညီ ရွေးကောက် တင်မြှောက်လိုက်သော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်ဟူသော ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို အမြန်ဆုံး ခေါ်ယူဖွဲ့စည်းပေးရန် အရေးတကြီး လိုအပ်ပေသည်ဟု ကြေညာစာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဥပဒေနှင့်အညီ လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေးကို တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး န၀တ အစိုးရအနေဖြင့် လွှတ်တော်ခေါ်ယူဖွဲ့စည်းပေးရန် တာဝန်ရှိခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင် ဂန္ဒီကြေညာစာတမ်းတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြစ်အပ်သော အာဏာ (သို့တည်းမဟုတ်) ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြစ်အပ်သော အာဏာလွှဲပြောင်းရေး ကိစ္စတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတစ်ရပ်ကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အသင့်ရေးဆွဲထားရှိပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရ၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ကြိုဆိုကြောင်း၊ ဤယာယီဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအားဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ အာဏာလွှဲပြောင်းရေးကို ဖြစ်မြောက်အပ်သည်ဟု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက တညီတညွတ်တည်း ယူဆကြောင်းတို့ကို ဖော်ပြထားသည်။ အန်အယ်လ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ယာယီ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ အာဏာလွှဲပြောင်းရေး တောင်းဆိုမှုသည် အဆိုပါကာလ နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘောင်ဝင်ပြီး န၀တ အစိုးရအနေဖြင့် အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ကာ နိုင်ငံရေးနည်းအရ အဖြေရှာခဲ့သင့်သည်။
ဂန္ဒီကြေညာစာတမ်းပါ ဖော်ပြချက်အရ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကသာလျှင် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်း အတည်ပြုရန် တာဝန်ရှိကြောင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ အာဏာအပ်နှင်းမှုမရှိဘဲ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ အာဏာစက်မရှိဘဲ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ အဆောင်အယောင် အရှိန်အ၀ါမရှိဘဲ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အတည်ပြု ပြဌာန်းခြင်းမရှိဘဲ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှအပ အခြား မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်၌မဆို၊ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲခွင့်လည်းမရှိ၊ ပြဋ္ဌာန်း အတည်ပြုခွင့်လည်း မရှိဟုလည်းကောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဂန္ဒီကြေညာစာတမ်းပါ ဖော်ပြချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရသည် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး တန်းတူရည်တူ သဘောမပါသော၊နိုင်ငံရေးအရ အပေးအယူ သဘောမပါသော တစ်ဖက်သတ် ကြေညာချက်များနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ကာ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း မေးမြန်းသည့်နည်းကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ စစ်ကြောရေးစခန်းများတွင် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း တန်းတူရည်တူ သဘောမရှိ၊ ဖိအားကင်းလွတ်မှု မရှိသဖြင့် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် အကျိုးမရှိခဲ့ဟု သုံးသပ်နိုင်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဂန္ဒီ အစည်းအဝေးကြီးတို့သည် အလွန်အရေးပါသော ကိန်းသေများ ဖြစ်သည်။ န၀တ အစိုးရသည် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ဂန္ဒီ ကြေညာစာတမ်းတို့ကို လျစ်လျူရှုလျှက် တန်းတူရည်တူ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးအရ အပေးအယူ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရသည့် သဘောကို မျက်ကွယ်ပြုလျှက် န၀တ အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေးစီမံချက် အပြည့်အ၀ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးကိုသာ ဦးတည်ခဲ့ပြီး ငါနှင့်မတူ ငါ့ရန်သူထုံးကို နှလုံးမူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူလူထုသည် နိုင်ငံရေး ခယောင်းလမ်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး ဆင်းရဲမွဲတေသထက် မွဲတေလာခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံရေးသမိုင်းကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်လျှက် နိုင်ငံရေးတွင် ပွင့်လင်း မြင်သာ တန်းတူရည်တူရှိသော နိုင်ငံရေး စားပွဲဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများသည်သာ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် အခရာကျကြောင်း နှင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်က အသံတိတ် နိုင်ငံရေး စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ၏ သမိုင်းဘီးကို ပြန်မလည်စေသင့်ပါကြောင်း မီးမောင်းထိုး ဆော်သြ လိုက်ရပါသည်။
(Written by - အရှင်သံဝရာလင်္ကာရ (ဓမ္မပိယဆရာတော်))
ဘ၀မှာ နေရေးဟာ အရေးကြီးသလို သေရေးကလည်း အရေးကြီးတာပဲ၊ "ရှင်ချောင် သေကျပ်၊ ရှင်ကျပ် သေချောင်" လို့ ရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးက ဆုံးမခဲ့တယ်။ ရှင်စဉ်အခါ ဘာသာရေး စည်းကမ်းတွေ ချိုးဖောက်ပြီး ပျော်ပျော်နေ သေခဲလို့ဆိုတာ ချောင်ချောင်နေခဲ့ရင် သေတဲ့အခါ အကျပ်အတည်းနဲ့ တွေ့ရတတ်တယ်၊ ရှင်စဉ်အခါ ဘာသာရေး ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ခပ်ကျပ်ကျပ်နေပါမှ သေတဲ့အခါမှာ ချောင်ချောင်လည်လည်နဲ့ သေရတယ်၊ ကြပ်မတ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘ၀မယိမ်းယိုင်ဖို့ တည်ငြိမ်ဖို့၊ မတိမ်းစောင်းဖို့၊ တည့်တည့်မတ်မတ်ဖြစ်ဖို့ သီလက ကြပ်ပေးတယ်၊ သီလက အကြီးအမှူးပြု ကြပ်ပေးလို့ ကြီးကြပ်တယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်တယ်။
ဒီဘက်ဘ၀ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေမှ ဘ၀ကူးတဲ့အခါ ဘ၀ကူးကောင်းမယ်၊ စည်းမရှိ၊ ကမ်းမရှိ၊ အထိန်းအကွပ်မဲ့ ပျော်သလို ချောင်ချောင်နေခဲ့ရင် ဘ၀ကူး မကောင်းနိုင်ဘူး၊ နောင်ဘ၀ အကျပ်တွေ့မယ်၊ အခက်တွေ့မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ၊ ဘ၀ဆိုတာ သောတာပန် မဖြစ်မချင်း ဂတိမမြဲသေးဘူး၊ လားရာဘ၀က စိတ်မချရသေးဘူး၊ သောတာပန် ဖြစ်ပြီးပါမှ စိတ်ချရတယ်၊ အဲဒီအတွက် ဘာလိုလဲဆိုရင် အဟောင်းပြုတ်ဖို့ လိုပါတယ်၊ အဟောင်းပြုတ်မှ အဟုတ်ပြောင်းပါမယ်၊ တကယ်ပြောင်းပါမယ်၊ အမှန်ပြောင်းပါမယ်၊ အမှန်အကန် ပြောင်းပါမယ်၊ သေချာရေရာတဲ့ ပြောင်းခြင်းနဲ့ ပြောင်းပါမယ်၊ အဟောင်းဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့ အနမဂတဂ္ဂ သံသရာက စွဲကပ်ပါလာတဲ့ ဟောင်းနွမ်းလှပေမယ့် မဆွေးမြည့်နိုင်တဲ့ အပါယ်မျိုးစေ့ ငါဆိုတဲ့ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ၊ အတ္တဒိဋ္ဌိပါ၊ အဲဒီ ငါ...ငါ...ငါဆိုတဲ့ အတ္တအဟောင်း ပြုတ်ပါမှ အဟုတ်ပြောင်းမှာပါ။
ဘ၀အကူးအပြောင်း အရေးကြီးသလို နိုင်ငံရေးအကူးအပြောင်းကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိတို့ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးခေတ်မှာ ၁၉၄၈၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၈၈၊ ၂၀၁၁ အကူးအပြောင်းကြီး လေးကြိမ်ခန့်မျှ ရှိခဲ့ပြီ၊ ၁၉၄၈ ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်းက မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပဲ ဆိုရမှာပါ။ ၁၉၆၂၊ ၁၉၈၈ ကတော့ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲလို့ တန်းတူနိုင်ငံတွေရဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်လောက် နောက်ကျကျန်ခဲ့တယ်။ အခု ၂၀၁၁ မှာတော့ သမိုင်းဘီး တစ်ပတ်ပြန်လည် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ ခေတ်တစ်ခုကို ပြောင်းခဲ့ပြန်ပြီ။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ အနုပညာရပ်တစ်ခုလို့ ဆိုကောင်းဆိုနိုင်လိမ့်မယ်။ အနုပညာဆိုတာ သုခုမပညာ၊ သိမ်မွေ့တယ်၊ အနုစိတ်တယ်၊ အနုသဘောဆောင်တယ်၊ ဒါကြောင့် ဒေါ်စုနဲ့ ၈၈ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ သတိကြီးစွာ၊ စိုးရိမ်မှုကြီးစွာ ကိုင်တွယ်နေကြသလားပဲ။ ဒါပေမဲ့ အရွေ့က လိပ်သွားနှုန်းနဲ့ ဆိုရင်တော့ သည်းခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အများပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀မှာတော့ ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှုဒဏ်ကို ခံရတာကလွဲလို့ ဘာမျှ ကောင်းကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ မပြောင်းလဲတော့ အပြောင်းအလဲဆိုတာကို မယုံကြည်သလို ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေအပေါ် အားကိုးအားထား မှုကလည်း လျော့ကျလာတယ်၊ မျှော်သာမျှော် ပေါ်မလာတော့ စိတ်ကုန်လာကြတယ်။ အဟုတ်ပြောင်းမှာလားဆိုတာ ယုံဖို့ခက်လာတယ်။ အဟုတ်ပြောင်းချင်ရင်တော့ အဟောင်းပြုတ်မှ ဖြစ်မှာ။ အဟောင်းပြုတ်မှ အဟုတ်ပြောင်းမှာ။ အဟောင်းပြုတ်မှဆိုတော့ လူဟောင်း၊ မူဟောင်း၊ အကျင့်ဟောင်း၊ စိတ်ဓာတ်ဟောင်း၊ အတွေးအခေါ်ဟောင်း၊ အယူအဆဟောင်း၊ အစွဲအလမ်းဟောင်း၊ ဘယ်အဟောင်းတွေ ပြုတ်ရမှာလဲ။
ဦးစွာပထမ လူကိုကြည့်တော့ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲပိုင်းမှာ လူဟောင်းက ရာခိုင်နှုန်း ၉၀ ခန့်ရှိတယ်။ ဒါတွေအားလုံး ပြုတ်ရမှာလား၊ လူသစ်ဘက်မှာ ကြည့်လိုက်တော့ နိုင်ငံတော်ကို တကယ် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ့် လူသားအရင်းအမြစ်က ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ အညွန့်ချိုးခံထားရတော့ သို့မဟုတ် အမြစ်ပြုတ်လုနီးနီး တူးဖြိုခံထားရတော့ လူသစ်ဘက်မှာလည်း နိုင်ငံတစ်ခုလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင် နိုင်ငံယန္တရားတစ်ခုလုံး အဆင့်မီမီ လည်ပတ်အောင် မောင်းနှင်နိုင်ဖို့ မလုံလောက်ဘူးလို့ ဆိုရမှာပဲ။
မျှခြေအရ အဟောင်းထဲမှာလည်း အကောင်းရှိနိုင်တယ်။ အသစ်ထဲမှာလည်း အဆိုးရှိနိုင်တယ်။အကောင်းအဆိုးကတော့ ဒွန်တွဲနေမှာ ဓမ္မတာပဲ၊ ဒီတော့ ဘာသာရေးမှာ သဿတဒိဋ္ဌိ၊ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ အစွန်းနှစ်ပါး လွတ်ဖို့လိုသလို လက်ရှိ မိမိတို့နိုင်ငံရေးမှာလည်း ယင်းအစွန်းနှစ်ပါး လွတ်ဖို့လိုလာတယ်။ အဟောင်းတွေချည်းပဲ ခရီးဆက်မယ်ဆိုရင် သဿတဒိဋ္ဌိ အစွန်းထွက်တယ်။ အဟောင်းတွေကို အကုန်ဖြုတ်၊ အသစ်တွေချည်းပဲ စခန်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်း ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ အစွန်းထွက်သွားမယ်။ အဟောင်းနဲ့အသစ် နိုင်ငံ့အကျိုးဆိုတဲ့ ဘုံရပ်တည်ချက်အပေါ်မှာ တူညီစွာ ရပ်တည်ကာ သင့်လျော်သလိုသွားမှ အစွန်းနှစ်ပါး လွတ်ပြီး မဇ္ဈိမပဋိပဒါ ကျမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဟောင်းထဲမှာ အနီးကပ်ဆုံးဥပမာ အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ယူဒိုယိုနိုတို့လို တိုင်းပြည်အကျိုးကို တကယ်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စိတ်စေတနာစွမ်း၊ သတ္တိဗျတ္တိစွမ်းရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပါဖို့တော့ လိုအပ်တယ်။
မူဆိုတာတော့ မူဝါဒ၊ စည်းကမ်း ဥပဒေတွေပါပဲ။ ဥပဒေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ပြည်သူကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့၊ ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင်ဖို့၊ ပြည်သူကို စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ ဒီအဓိပ္ပာယ် ထွက်ရမယ်။ အဲဒီအဓိပ္ပာယ်ကို မဆောင်တဲ့ ပြည်သူကို ဖိနှိပ်လိုတဲ့၊ နှိပ်စက်လိုတဲ့၊ ဒုက္ခပေးမယ့် အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်သုံးတော်သန်လျက် ဥပဒေဟောင်းတွေကိုတော့ အကုန်ဖြုတ်ပေး၊ ဖျက်ပေးရမယ်။ အခု ၂၀၀၈ နာဂစ်အခြေခံ ဥပဒေကြီးဟာလည်း ပြည်သူဘက်က မရပ်တည်ဘူး၊ ပြည်သူတို့ ကောင်းကျိုးကို မကြည့်ဘူးလို့ ပညာရှင်တို့က ဆိုကြတယ်။ ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာစေမယ့် ဥပဒေဟောင်းမှန်သမျှကတော့ အကုန်ဖျက်ပေး၊ အကုန်ဖြုတ်ပေးရမယ်။ အခု NLD က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့စပ်လို့ ပြင်ဆင်လိုတဲ့အချက် ၁၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားတယ်။ တချို့က ၁၅၀ ကျော် ရှိကြောင်း ဆိုတယ်။ ပြည်သူအများစုကတော့ ဘာဥပဒေမှ သိပ်နားလည်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ဥပဒေပညာရှင်တွေက ဥပဒေနဲ့စပ်လို့ ပြည်သူတွေကို အရေးကြီးတဲ့ ဥပဒေတွေ ထိုက်သင့်သလောက် သိရှိနားလည်အောင် ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ပေးဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံရေးပဲ။
အကျင့်ဟောင်းတွေကတော့ ယခင် စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်ခဲ့သူတွေ ကိုယ်ကျိုးရှာမှု၊ အဂတိလိုက်စား အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေပဲ။ တိုင်းပြည် မွဲရတယ်ဆိုတာ အဲဒီအကျင့်ပျက်မှုတွေက အဓိက အချက်တွေပဲ။ ဒါကြောင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို တိုက်ဖျက်မယ်ဆိုရင် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း၊ တရားစီရင်ရေးပိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ အဂတိလိုက်စားမှု၊ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုဆိုတဲ့ အကျင့်ဟောင်းတွေ ပြုတ်အောင် အဓိက တိုက်ဖျက်ကြရမှာ။ အဟောင်းပြုတ်မှ အဟုတ်ပြောင်းမယ်ဆိုတာ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အဲဒီအကျင့်ဟောင်းတွေက အဓိကပဲ။ နောက်ထပ် အရေးကြီးတာက သူတို့နဲ့ နွယ်တဲ့ မျိုးဆက်လူသစ်တန်းတွေမှာလည်း အတုမြင် အတတ်သင်ဆိုသလို အဲဒီအကျင့်ဆိုးတွေပါ မလာဖို့ လိုအပ်တယ်။
၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃ အတွင်းမှာ ရခိုင် မိတ္ထီလာစတဲ့ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးအသွင်ယူ ပဋိပက္ခတွေ။ ၂၀၁၃၊ ၁၀ လပိုင်းမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး ချိန်ကိုက်ပေါက်ကွဲလိုက်တဲ့ ဗုံးတွေ၊ ဒါတွေဟာလည်း ယခင်အစိုးရတွေရဲ့လက်ထက် ကတည်းက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အကျင့်ဆိုး အကျင့်ဟောင်းတွေပါ။ ဒီအဟောင်းတွေလည်းပြုတ်မှ အဟုတ်ပြောင်းမှာ။ နောက်ပိုင်း နှစ်နှစ်ဆယ်ကာလမှာ ပြည်သူတွေမှာလည်း အကျင့်တွေ၊ စိတ်ဓာတ်တွေ၊ စည်းကမ်းပိုင်းတွေ ယိုယွင်းပျက်စီးကုန်တယ်။ ပြည်သူတွေဘက်ကလည်း အဲဒီအကျင့်ဟောင်း၊ စိတ်ဓာတ်ဟောင်းတွေ ပြုတ်ဖို့၊ ပြင်ဖို့လိုတယ်။
စိတ်ဓာတ်ဟောင်း ဆိုတဲ့နေရာမှာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ သူတို့နဲ့ ခရိုနီခေတ်ပျက် သူဌေးတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေက အဆိုးဆုံးပဲ။ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု တစ်ဝက်ကျော်ကျော်က သူတို့လက်ထဲမှာ ရောက်သွားပြီး တိုင်းပြည်ကတော့ အခွံပဲ ကျန်တယ်။ သူတို့ကတော့ ကမ္ဘာ့တန်းဝင် သူဋ္ဌေးကြီးတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ပြည်သူသန်း ၆၀ မှာတော့ ဆင်းရဲတွင်းက နက်သထက် နက်သွားတယ်။ နိုင်ငံရေးကို စီးပွားဖြစ်လုပ်လိုတဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်စားလိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဟာ ၀ိသမလောဘ မသမာတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေပဲ။ အဲဒီ စိတ်ဓာတ်ဟောင်းတွေ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အစိုးရပိုင်းမှာရော၊ အခြားဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေမှာရော ပြုတ်ဖို့၊ ဖြုတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ လူနဲ့မူက ခွဲလို့မရဘူး။ လူပြုတ်မှ မူပြုတ်မှာ ဆိုရင်တော့ လူပါ ဖြုတ်တန်က ဖြုတ်ရမှာပဲ။ ဒီအဟောင်းတွေပြုတ်မှ အဟုတ်ပြောင်းမှာပဲ။
စိတ်ဓာတ်ထဲကနေ အတွေးအခေါ်တွေ အယူအဆတွေ ထွက်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကပဲ စိတ်ဓာတ်ကို ဦးဆောင်သွားတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ကိုယ့်အကျိုး ကိုယ့်စီးပွားကိုသာ တစ်ဖက်သတ်တွေးတဲ့ အတွေးအခေါ် ဟောင်းတွေ တိုင်းပြည်ကို ငါတို့အုပ်စုက ဦးဆောင်မှသာ ဖြစ်မယ်၊ နိုင်ငံရေးမှာ ငါတို့ပါမှ ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆနေတဲ့ အယူအဆဟောင်းတွေ ပြုတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ သူတို့တစ်တွေအတွက် ဘ၀ပဒေသာပင် ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်တော့ ဒီလိုနိုင်ငံရေး လုပ်ရတဲ့အပေါ်မှာ ဥပါဒါန် ပြင်းပြင်းနဲ့ စွဲလမ်းကောင်းစွဲလမ်း နေပါလိမ့်မယ်။ အင်မတန် ဆိုးရွားလှတဲ့ အဲဒီအစွဲအလမ်း ဟောင်းတွေလည်း ပြုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဟောင်းပြုတ်မှ အဟုတ်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်။
အစောပိုင်းမှာ ပြောကြတာက နိုင်ငံရေးကတော့ ပြောင်းပါရဲ့။ စီးပွားရေးက မပြောင်းဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ နိုင်ငံမှာ တကယ့်စီးပွားရေးက ဦးပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ ခရိုနီစီးပွားရေးပဲရှိတာ။ သာမန်အရပ်သားမှာ စီးပွားရေး မရှိဘူး။ ထမင်းစားဖို့လောက်ပဲ ရှိတာ။ ဒီတော့ ဦးပိုင်စီးပွားရေး၊ ခရိုနီစီးပွားရေး၊ အရပ်သား စီးပွားရေး သုံးခု အချိုးညီသွားမှ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးက ပြောင်းမှာ။ အဟုတ်ပြောင်းဖို့ဆိုရင် အဟောင်းပြုတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
မောင်တောကြိမ်ချောင်းဈေးမီးလောင်၊ ဆိုင်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါး မီးထဲပါ
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် ကြိမ်ချောင်းဈေး မီးလောင်သဖြင့် ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးခန့် မီးထဲပါသွားသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက် ယမန်နေ့ ညဥ့် ၁၂ နာရီမှ စတင်လောင်ကျွမ်းခြင်း ဖြစ်ပြီး နံနက် ၄ နာရီမှ မီးငြိမ်းသွားသည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ စရဖ အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ ပေါ့ဆမီးပါ။ ဈေးဆိုင်တွေထဲမှာ မီးကြွင်းမီးကျန်တွေ ရှိရာကနေ စလောင်ကျွမ်းတာပါ။ ဆိုင်ခန်း ၈၀ ကျော် မီးထဲပါသွားပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ညဥ့်အချိန် လူများ အိပ်ပျော်နေချိန်တွင် လောင်ကျွမ်းခြင်း ဖြစ်သဖြင့် မီးလောင်ကျွမ်းမူ ပမာဏများပြားကြောင်း၊ ယင်းပြင် ကြိမ်ချောင်းတွင် မီးသတ်ကားလည်း မရှိသဖြင့် မီးကို အချိန်တိုကာလ အတွင်း မငြိမ်းသတ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
မောင်တော မီးသတ်ဌာနမှ လိုက်ပါသွားသော်လည်း မီးငြိမ်းပြီးမှ ရောက်ရှိသွားသည်ဟု မီးသတ်ဦးစီးဌာနနှင့် နီးစပ်သူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
“ မောင်တောက မီးသတ်ကား လိုက်သွားပါတယ်။ ခရီးက ၂၇ မိုင်ဝေးပြီး လမ်းကြမ်းတဲ့ အတွက် ၄ နာရီ အချိန်လိုပါတယ်။ ကားရောက်တော့ မီးက ငြိမ်းသွားပါပြီ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ကြိမ်ချောင်းဈေးတွင် ၉၀ ရာခိုင်နုန်း ဈေးဆိုင်များကို မွတ်ဆလင်များက ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊ ရခိုင်ဆိုင် အနည်းငယ်သာ ရှိကြောင်း သိရသည်။
အမုန်းတရားမရှိသဖြင့် အောင်မြင်မှုရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
အမုန်းတရားတွေမရှိ်ခဲ့လို့ အောင်မြင်မှုတွေ ရတာလို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ အီတလီ နိုင်ငံက ချီးမြှင့်တဲ့ တူရင်းန်မြို့တော်သူဆု လက်ခံရယူပြီး ပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်း ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
“ကျမနေအိမ် အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရတဲ့ အချိန်မှာ မကြာခဏ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ကျမ စစ်အာဏာရှင်ကို စတင်မုန်းတဲ့နေ့ဟာ ကျမ ရှုံးနိမ့်မယ့်နေ့လို့။ ဒါပေမယ့် ကျမသူတို့ကို ဘယ်တော့မှ မမုန်းပါဘူး။ ဒါတွေကြောင့် ကျမနဲ့ အတူ ကျမလူတွေလည်း အကြိမ်ကြိမ် အောင်မြင်မှုတွေ ရလာတာပါ။ ကျမတို့ကြိုးစားဖို့ မျှော်လင့်နေတာက အမုန်းတရားမဟုတ်ပါဘူး။ ခါးသီးမှုတွေ ခံစားနေရလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ နားလည်မှုတွေ အခြေခံအားဖြစ်တော့ လူ့တန်ဖိုးတွေကို မျှဝေကြတာတွေ နဲ့ မတူကွဲပြားမှုတွေအကြားမှာ အောင်မြင်တွေရလာတာဖြစ်ပါတယ်။”
ဒါ့အပြင် ဒေါ်အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တူရင်းန်ရဲ့ မြို့တော်သူဖြစ်ရတာ အင်မတန်မှ ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း၊ အီတလီ နိုင်ငံက လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အားလုံးကိုလည်း ဂုဏ်ယူကြောင်း ပြောပါတယ်။
အာဏာရှင်နဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို ယုံကြည်တဲ့ သူတွေအကြားမှာ ကွာခြားမှုတွေကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထောက်ပြထားပါတယ်။
“အာဏာရှင်ဖြစ်တယ်ဆုိုပေမယ့်လည်း လူသားတွေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တန်ဖုိုးတွေက မတူဘူးဆုိုတာက ကြိမ်းသေပါတယ်။ တခြားလူတွေ ဘယ်လို့ တင်မြင်တွေးခေါ်နေသလဲ ဆိုတာကိုလည်း နားလယ်အောင် ဘယ်တော့မှ မလေ့လာပါဘူး။ ဒါတွေက လူသားတွေရဲ့ အခြေခံ ဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်မှာ ငြိမ်းချမ်းပြီး တည်ငြိမ် ခိုင်မာတဲ့ လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်အောင် အီတလီ နိုင်ငံရဲ့ အကူအညီတွေလိုကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဖခင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ငယ်စဉ်ကတည်းက အရမ်းလေးစားတဲ့ အီတလီနိုင်ငံ ဘုန်းကြီးတပါးဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ရင်းနီးတယ်ဆိုတာ သူအနေနဲ့ သိပေမယ့် ဘုန်းကြီးက တူရင်းန်မြို့ကနေ လာတယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တူရင်းန်မြို့နဲ့ ဆက်နွှယ်မှုကို အမှတ်တရ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဘိုလော့ခ်ညာ နဲ့ ပါးမား မြို့တော်သူဆုကို ဒီနေ့ ဆက်လက်သွားရောက်လက်ခံမှာဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။
by ခွန်ဘသာ (ဒီဗွီဘီ)
အလုပ်တစ်နေရာအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးရာ လူငယ်တစ်ဦးအလှည့်သို့ရောက်လာ၏။
လူငယ် ။ မောင်သော်
ရွေးချယ်သူ ။ အထက်လူကြီးက မေးရင် " ဆရာ " ထည့်ဖြေရတယ်ကွ။ ပြန်ပြော
လူငယ် ။ ဟုတ်ကဲ့ " ဆရာမောင်သော်"
လေယာဉ်တစ်စင်းပေါ်မှာ တရုတ်လူမျိူးတစ်ယောက်၊အိနိယလူမျိူးတစ်ယောက်၊အင်္ဂလိပ်လူမျိူးတစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတစ်ယောက် အားလုံးလေးယောက်လိုက်ပါကြတယ်။
လေယာဉ်က ခဏကြာတော့ စက်ပျက်သွားတော့ လေယာဉ်မှူးတွေ လေထီးကိုယ်စီနဲ့ ထွက်လာပြီး။
လေထီး အပိုက တစ်ခုထဲရှိတာ ခင်များတို့ ထဲက တစ်ယောက်ဘဲ ရမှာ ဆိုပြီး တံခါးဖွင့်ပြီး ခုန်ချသွားပါလေရော။
အဲဒီတော့ အားလုံး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ ကြောင်နေကြတယ်လေ။
တရုတ်ကြီးက သူတို့က လူဦးရေများတော့ တစ်ယောက်လျှော့လို့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီး
မဟာ တရုတ်လူမျိူး လို့ အော်ပြီး လေထီးမပါဘဲ ခုန်ထွက်သွားပါတယ်။
အိန္ဒိယလူမျိူးကလည်း အားကျမခံ သူတို့လည်း လူဦးရေများတာဘဲဆိုပြီး
ကြီးမြတ်သော အိန္ဒိယလူမျိူး လို့ အော်ပြီးလေထီးမပါဘဲ ခုန်ထွက်သွားပါတယ်။
အဲဒီတော့ အင်္ဂလိပ်လူမျိူးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာ လူမျိူး နှစ်ယောက်ထဲကျန်တော့တယ်
သခင်မျိူးဟေ့ ဒို့ဗမာ လို့အော်လိုက်ပြီး ခုန်ထွက်သွားပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ကြီးက ပျော်သွားပြီး လေထီးကိုယူမလို့ ကြည့်လိုက်တော့ မရှိတော့ပါဘူး။
ရထားပေါ်မှ စကားဝိုင်း …….. လူတယောက်က ပြောသည်-
ပထမလူ။ ကျနော့ မိန်းမ ကိုယ်ဝန်ရှိတော့ 'ကပတိန် နှစ်ယောက် စာအုပ်ဖတ်မိတယ်။
မကြာပါဘူး အမွှာပူး မွေးတာပဲ'
ဒုတိယလူ။ ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ကျနော့မိန်းမလည်း ခလေးမမွေးခင်က ပျင်းလို့ဆိုပြီး
'လူစွမ်းကောင်း သုံးယောက်' စာအုပ်ဖတ်တယ်လေ၊ မွေးတော့ သုံးမွှာပူးဗျ"
ထိုစဉ် တတိယလူ၏ မျက်နှာသည် ဖြူဖတ်ဖြူရော်ဖြစ်ပြီး ရေတောင်းသောက်သဖြင့် ကျန်လူများက စိုးရိမ်တကြီးဖြစ်ကာ ၀ိုင်းမေးကြလေရာ... တတိယလူ ပြောလိုက်ပုံက... ""အင်း.. ကျနော့မိန်းမက ရက်စေ့ လစေ့ ဖြစ်နေပြီဗျ၊ မနက်က အလီဘာဘာနဲ့ ခိုးသားငါးရာ စာအုပ်ကို ဖတ်နေတာ တွေ့ခဲ့တယ်""
စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံတွင်ဖြစ်သည်... လူနာတစ်ဦးကို စစ်ဆေးသည်...
"မင်းကို တို့ အခု ဒီဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ပေးတော့မယ်...မင်းအပြင်ကို ရောက်ရင် ဘာလုပ်မလဲ"
မကောင်းသေးဟုဆိုကာ.. ဆေးထပ်ကုသည်.. မတတ်နိုင်တော့ သည့် အဆုံး... နိုင်ငံခြားမှ... ပညာရှင်.. ဆရာဝန်များကို အကူအညီလှမ်းတောင်းသည်.. လူနာနှင့် ပတ်သက်သော ဒေတာများ.. ပို့ပေးသည်.... ဆရာဝန်ကြီးများ ကလည်း စိတ်ဝင်စားကြသည်.. သို့ နှင့် ဆရာဝန်များအားလုံး....ထို ဆေးရုံသို့ လာပြီး လူနာကို ထပ်မံစစ်ဆေးသည်......
" မင်းလည်း အားလုံး ကောင်းနေပြီပဲကွာ... မင်းကို ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ပေးတော့မှာပါ.... မင်း အပြင်ရောက်ရင်ဘာလုပ်မလဲ ပြောပါဦး"
"ဒါ.....ဒါ...ဒါ..ဆိုပြီး ..ပြီးရင်ရော... "
" ထိုင်ပါခင်ဗျား…ကျွန်တော်က ဧည့်ကြိုပါ" .. တဲ့
(၁)နီကိုးကစ်မင်းကဲ့သို့ နှုတ်ခမ်းပိုင်ရှင်မျိုး၊ နှာခေါင်းနေရာတွင် ကျယ်၍ ဘေးအောက်ဖက်ကို ကျဉ်းသွားသောနှုတ်ခမ်းပိုင်ရှင်မျိုးသည် သားများထက် သမီးကို ပိုရရှိကြသည်။
(၂)အပေါ်နှုတ်ခမ်းပေါ်တွင် မှည့်ရှိသူသည် သားများ၏မိခင်၊ဖခင်တို့ ဖြစ်တတ်သည်။ အောက်နှုတ်ခမ်းတွင် မှည့်ရှိသူသည် သမီးများ ရရှိတတ် သည်။ နှုတ်ခမ်းအလယ်တွင် မှည့်ရှိသူသည် အိမ်ထောင်ဖက်ရှာရ လွယ်ကူသည်။
(၃)ပါးစပ်ကျယ်သူများသည် မိဘကို ပြန်မပြောဘဲ ရိုသေကျိုးနွံကြသည်။ အိမ်မှာ (၁)ယောက်တည်းနေဖို့ မလိုလားပေ။ လွတ်လပ်မှုကို လိုလားပြီး ရဲရင့်သတ္တိရှိကြသည်။
(၄)နှုတ်ခမ်းတွင် ကန့်လန်ဖြတ်လိုင်းပါသူတွင် အိမ်ထောင်ရေး၌ အခက်အခဲများနှင့်ကြုံရတတ်သည်။ ထိုသူ သည် ယောကျာ်းဖြစ်စေ၊ မိန်းမ ဖြစ်စေ သူ၏များလှစွာသော ကလေးများအတွက် အနစ်နာခံရသည်။ ကလေးများက သူတို့ကို ပြဿနာ ရှာတတ်သည်။
(၅)နှုတ်ခမ်းကြီးသူတို့သည် လွတ်လပ်မှုကို လိုလားပြီး သူများကျအောင်ပြောတတ်တယ်။ လက်တွေ့ မှာမူ အပြောနှင့်တစ်ထပ်တည်းကျအောင် လုပ်ဖို့ ခဲယဉ်းသည်။
(၆)နှုတ်ခမ်းသေး၍ သာမန်နှုတ်ခမ်းလောက်ကျယ်ခြင်းမရှိသည့်နှုတ်ခမ်းပိုင်ရှင်များသည် နှိမ့်ချတတ်ပြီး သူတို့နာမည်ကောင်းရဖို့ကို လှစ်လျူရှုပြီး သူတစ်ပါးကို အထောက်အပံ့ ပေးတတ်ကြသည်။
(၇) နှုတ်ခမ်းကွေးအထက်ဖက်သို့ ရောက်ပြီး ပြုံးလိုက်တိုင်း လမင်းကွေးနှင့်တူသည့် နှုတ်ခမ်းပိုင်ရှင်တို့တွင် သူငယ်ချင်းကောင်းများရှိပြီး လိုအပ်လျှင် ကူညီရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်သူ ဖြစ်သည်။
(၈)နှုတ်ခမ်းကွေးအောက်ဖက်သို့ ခပ်မဲ့မဲ့ပုံစံရှိသူသည် ပုံကြီးချဲ့ပြောတတ်သူဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်းလိမ်ညာနေတတ်သူဖြစ်သည်။
“ အန်ကယ် . .အန်ကယ့်သမီးနဲ့ ကျွန်တော်လက်ထပ်တာ ၃-လ ပဲရှိသေးတယ် ၊
ဒါပေမယ့် ကလေးမွေးပြီ . . ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိ်ုင်မှာလဲ . . ကလေးတစ်ယောက်မွေးဖို့ က
“ အေး . . . အေး..”
ဓါတုဗေဒ ဆရာက သူ့ကျောင်းသားတွေကို အရက်သောက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေသိရအောင်
လက်တွေ့စမ်းသတ်မှု တစ်ခုလုပ်ပြတယ်။ သူက အရက်တစ်ခွက်၊ ရေတစ်ခွက်နဲ့ သန်ကောင် နှစ်ကောင် ယူလာတယ်။
"ကဲ..တပည့်တို့ ဒီသန်ကောင် နှစ်ကောင်ကို သေချာကြည့်ထားနော်" ဆရာက ပြောပြီး
အရက်ခွက်ထဲကို တစ်ကောင်၊ ရေခွက်ထဲကို တစ်ကောင် ထည့်လိုက်တယ်။
ရေခွက်ထဲက သန်ကောင်က ဂျွမ်းထိုး ကခုန်ပြီး ပျော်ရွှင်နေတယ်၊ အရက်ခွက်ထဲက
သန်ကောင်ကတော့ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးပြီး ခဏနေတော့ ငြိမ်သက် သေဆုံးသွားတယ်။
"ကဲ တပည့်တို့ တွေ့ကြတယ် မဟုတ်လား??? ဒီစမ်းသတ်မှုကို ကြည့်ပြီး
ဘယ်လို သင်ခန်းစာယူနိူင်သလဲ" ဆရာက တပည့်တွေကို မေးတယ်။
နောက်ဆုံးတန်းမှ အောင်ကျော်က လက်ထောင်ပြီး ထဖြေတယ်။
"အရက်သောက်တဲ့လူတွေမှာ သန်ကောင် မရှိနိူင်ပါဘူး ဆရာ"
လွန်ခဲ့သောလပေါင်း ၃၁ လက အငြိမ်းစားယူသွားခဲ့သူတစ်ဦး၏ မကြာမီက ပြောစကားတစ်ခွန်းကြောင့် နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသည့် ပြည်သူများကြား ဂယက်ရိုက်သွားခဲ့သည်။
သာမန်အငြိမ်းစားတစ်ဦးပြောလျှင် ထိုသို့မဖြစ်နိုင်သော်လည်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ငြိမ်း) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ ပြောစကားကြောင့်သာ ယခုလို ဂယက်ရိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းကျွတ်ကာလတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့်မိသားစုသည် အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံ သွားရောက်ဂါရ၀ပြုခဲ့သည်။
ထိုသို့ သွားရောက်ဂါရ၀ပြုစဉ် အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်နေမှုကို ဘေးကစိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်တဲ့သဘောရှိတယ်။ မဖြစ်သင့်တာတွေမဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်လည်း သူ့မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေရှိခဲ့တယ်”ဟု ဦးရွှေမန်းက တစ်ဆင့်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ ပြောဆိုလာသည့်အတွက် လက်ရှိအစိုးရနှင့် တပ်မတော်အပေါ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ(ငြိမ်း)အနေဖြင့် သြဇာသက်ရောက်မှု ရှိနေသေးသလားဆိုသည့် သံသယမှာလည်း နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူများကြား ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူများနှင့် ပြည်သူများအကြား ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိလာသည့်အသံများ ကြားလာရသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးအေးမောက်ကမူ ဦးသန်းရွှေအနေဖြင့် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု မထင်ကြောင်း သူ၏ထင်မြင်ချက်ကို ပြောကြားသည်။
“လွှတ်တော်ထဲမှာတော့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်တယ်။ ဝေဖန်နိုင်တယ်။ တကယ်လို့သာ နောက်ကရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့၊ ဘာတို့က နည်းနည်းတော့တွန့်မှာပေါ့”ဟု ဦးအေးမောက်က ဥပမာပေး၍ပြောဆိုသည်။
ဦးအေးမောက်နည်းတူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ဦးမင်းသူကလည်း အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအနေဖြင့် ပါဝင်ပတ်သက်မှု လုံးဝမရှိတော့ကြောင်း ထောက်ခံပြောဆိုသည်။
“တကယ်တော့ သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းက ရှင်းပါတယ်။ လူထုဆန္ဒအတိုင်းသွားနေတယ်”ဟု ဦးမင်းသူကဆိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအနေဖြင့် ၂၀၁၀ အငြိမ်းစားမယူမီ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များအား ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ တက်လာသည့်အချိန်မှစ၍ နိုင်ငံရေးတွင် ၀င်ရောက်မစွက်ဖက်ရန် မှာကြားခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းတစ်ဦးကပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ(ငြိမ်း)အနေဖြင့် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ၀င်ရောက်လာပါကလည်း လွှတ်တော်တွင် ၎င်းပြောသည့်အတိုင်း ဖြစ်မည်မဟုတ်တော့ကြောင်း တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူ အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဦးလှဆွေကသုံးသပ်သည်။
အငြိမ်းစားယူပြီးသည့်နောက်ပိုင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ ကြွချီလာသော ဗုဒ္ဓစွယ်တော်အတွက် အလှူငွေထည့်ဝင်ခြင်း၊ ပျဉ်းမနားမြို့ရှိ သာသနာ့ဗိမာန်နှင့် သံဃာ့ဆေးရုံတို့အား ငွေကြေးလှူဒါန်းသည့်သတင်းများသာ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအနေဖြင့် အငြိမ်းစားယူပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ နေပြည်တော်ရှိ A1 အိမ်တော်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး စာဖတ်နေကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဌေးဦးက ပြီးခဲ့သည်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် မီဒီယာများသို့ပြောကြားသည်။
စာဖတ်နေသော အသက် ၈၀ ရှိနေပြီဖြစ်သည့် အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအား ဦးဌေးဦးနှင့် ဦးအောင်သောင်းတို့ ယခုနှစ်လယ်ပိုင်း၌ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်း ထိုတွေ့ဆုံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အကြောင်းအရာမှ ပြန်လည်ပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအနေဖြင့် အစိုးရနှင့် ၀န်ကြီးဌာနများအပေါ် နိုင်ငံရေးအရ ပတ်သက်မှုမရှိသော်လည်း လက်ရှိတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များကမူ အချို့သော အကြောင်းအရာများ၌ ဦးသန်းရွှေထံမှ အကြံဉာဏ်ရယူတာမျိုးရှိနိုင်ကြောင်း မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ကမ္ဘာကျော်သတင်းစာဆရာ ဘာတေးလ်လင့်တနာကသုံးသပ်သည်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများတွင် ဦးသန်းရွှေထံမှ အကြံဉာဏ်တောင်းခံနိုင်ကြောင်း မြန်မာ့အရေးအတွက် ဘာတေးလ်လင့်တနာကဆိုသည်။
Faebook Comment Box ထဲမှာ : putnam : လို့ ရိုက်လိုက်ရင် ထွက်လာတဲ့ ခေါင်းပုံကို ကျနော်ဆိုရင် အစက ဂျက်စတင်ဘီဘာခေါင်း လို့တောင် အနီးစပ်ဆုံး လျှောက်ထင် လိုက်ပါသေး တယ်။ သို့ပေမယ့် အဲဒါ မှားပါတယ်။ အဲ့ဒီ Emotion icon ပိုင်ရှင်က Chris Putnam လို့အမည်ရတဲ့ လူငယ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
Georghia Southern University မှာ တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က Faceboook ကို ဟက်ခဲ့ပါတယ်။ အကောင့်ပေါင်း ၁ ထောင်ကျော်ရဲ့  Profile page ကို Myspace Social Network က ပုံစံ ဖြစ်အောင် ပြောင်း လဲခဲ့ပြီး Contat Detail အချို့ ကိုတောင် ဖျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Cross-site scripting ကို အသုံးပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို Facebook က ထောက်လှမ်းမိခဲ့ပြီး Co-founder ဖြစ်သူ Dustin Moskovitz က ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် အကမ်းလှမ်းခံရပြီး Facebook security နဲ့ Developing Team မှာ ထူးချွန်တဲ့ Engineer တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။
Facebook မှာ Photo Album တင်တာနဲ့ ဗီဒီယိုတင်တာတွေကို Chrit Putnam ဦးဆောင်ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကုမ္မဏီမှာ စုစုပေါင်း ၄ နှစ်ပဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့သူပါ။ သက္ကရာဇ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ကုမ္မဏီမှ ထွက်ခွာ ခဲ့ပါတယ်။ သူထွက်ပြီးနောက် Facebook chat, Comment မှာ လို့ ရိုက်ရင် Chris Putnam ရဲ့  ခေါင်းပုံစံပေါ်စေဖို့ Facebook က အမှတ်တရ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲ အစိုးရလျှပ်စစ်မီး မသုံးဘဲ မီးစက်သာ သုံးမည်
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲဝင် ကစားသမား များကို ကြိုဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ်ကို လူစည်းကားရာ နေရာအများစုကို စိုက်ထူထားသည့် မြင်ကွင်း။ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို မယုံကြည်၍ မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် ပထမဆုံး အကြိမ် လက်ခံကျင်းပမည့် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲ (SEA GAME) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကို ဗို့အားမြင့် မီးစက်ကြီး များ အသုံးပြုဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။
နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အသုံး မပြုရခြင်း မှာ ဖွင့်ပွဲကာလ မီးပျက်မည်ကို စိုးရိမ်၍ ဖြစ်ပြီး ဖွင့်ပွဲအချိန် မီးပျက်ပါက နိုင်ငံဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းနိုင်သဖြင့် မီးစက်များ အသုံးပြု ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ လူထု ဆက်ဆံရေးနှင့် ပညာပေးရေး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဌေးအောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲကြီး ကျင်းပနေစဉ်မှာ အစိုးရ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းကို သုံးမှာ မဟုတ်ဘူး။ မီးပျက်နိုင်တယ်လေ။ မီးစက်ပဲ သုံးမယ်။ ဖွင့်ပွဲ မတိုင်ခင် တနာရီလောက်ကတည်းက ကြိုပြီးတော့ ကျင်းပမယ့် အခမ်းအနား အဆောက်အဦ၊ အားကစားရုံ တခုလုံးကို မီးစက်အလုံး ၂၀ လောက်နဲ့ မီးပေးဖို့ စီစဉ်ထားတယ်´´ ဟု ဦးဌေးအောင်က ဆိုသည်။
အလားတူ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနားတွင်လည်း အစိုးရဓာတ်အားစနစ်ကို အသုံးမပြုဘဲ မီးစက်များကိုသာ အသုံးပြုပြီး ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
၂၇ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းကျင်းပရေးကော်မတီနာယက ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းက ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ရေး သက်ဆိုင်သော ၀န်ကြီးဌာန အားလုံး တာဝန်ကျေအောင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အမှားအယွင်း တခုခုဖြစ်ပေါ်၍ တိုင်းပြည် ဂုဏ်သိက္ခာကျ အရှက်ရစေပါက ၀န်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် အပါအ၀င် အရာရှိများကို အလုပ် ထုတ်သည် အထိ အရေးယူမည်ဖြစ်ဟု ညွှန်ကြားချက်ပေးထားကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဆီးဂိမ်းမှာ တိုင်းပြည် ဂုဏ်သိက္ခာ မကျဆင်းအောင် လုပ်ဖို့ ဒုသမ္မတကိုယ်တိုင် ညွှန်ကြားထားတယ်။ အမှားအယွင်း ဖြစ်ခဲ့ရင် တာဝန်ယူ ထားတဲ့ ၀န်ကြီးဌာနတွေက ၀န်ကြီးတွေ တန်းစီပြီး ပြုတ်မှာ။ သူတို့က ပိုပြီးတော့ ဘ၀နဲ့ ရင်းရမှာ´´ ဟု အားကစား ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဆိုသည်။
၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး ဆီးဂိမ်း ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရန် ရက်ပိုင်းအလို တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မှုများ မကြာခဏ ဆိုသလို ဖြစ်ပွား လျက်ရှိကြောင်း၊ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကာလ ယင်းသို့ မီးပြတ်တောက်မှု များဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် နိုင်ငံဂုဏ်သိက္ခာ ကျနိုင်သည် ဆိုသော သုံးသပ်ချက်များ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ အပါအ၀င် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတွင် တနာရီကျော်ကြာ ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှု တခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဆိုပါ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုသည် ပြည်မြို့အနီးရှိ ရွှေတောင်နှင့်မြောင်းတကာသို့ သွယ်တန်း ထားသော မဟာဓာတ်အားလိုင်းကြိုး ချို့ယွင်းပြတ်တောက်မှု ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့က ဆိုသည်။
အစိုးရက အားနည်းချက်များစွာရှိနေသည့် လျှပ်စစ်အားပေးစနစ်ကို ယုံကြည် စိတ်ချမှုမရှိသဖြင့် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန် ၊ မန္တလေးနှင့် ငွေဆောင်ဒေသ တို့တွင် မီးစက်များစွာ အရန်သင့် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
နေပြည်တော် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက “ဖွင့်ပွဲမှာက မီးအရမ်းသုံးရမှာ။ Animation တွေရော၊ မီးစလိုက်တွေရော သုံးမှာ ဆိုတော့ ၀န်အား မနိုင်တာတွေ ဖြစ်သွား လိမ့် မယ်။ အများကြီး သုံးမှာဆိုတော့ မီးဆိုင်း ၅ ခု ကို မီးစက် တလုံး ပေးထားမယ် ဆိုတာမျိုးတွေ ပါတယ်။ အကုန်လုံး ချောချော မွေ့မွေ့ပြီးသွားအောင် ဘာအနှောင့် အယှက် မှ မရှိအောင် လို့ မီးစက်တွေ သုံးမှာ။ နေပြည်တော် တမြို့လုံးလည်း ထိန်နေမှာပဲ။ အကုန်လုံးကို မီးစက်တွေနဲ့ လုပ်မယ်လို့ သိထားတယ်´´ဟု ဧရာဝတီသို့ ရှင်းပြသည်။
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အောင်ဆန်းအားကစားကွင်း၊ သုဝဏ္ဍကွင်း ၊ သိမ်ဖြူကွင်း၊ ဒဂုံမြောက်ပိုင်း ရှိ သေနတ်ပစ်ကွင်း နေရာများတွင် မီးမှန်စေရန် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်ခဲ့လျှင် အလို အလျှောက် မောင်းနှင်ပေးမည့် မီးစက်များဖြင့် အသင့်ပြင်ထားကြောင်း၊ ဆီးဂိမ်းကာလ ဓာတ်အားမပြတ်တောက်ရန် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးရန်လင်းက ပြောသည်။
“ဆီးဂိမ်းကာလ ရန်ကုန်မှာ မီးပျက်သွားခဲ့ရင် Generator တွေက အလိုအလျောက် ၀င်မောင်းမှာ။ မီးစက် တွေလည်း အဆင်သင့် ပြင်ထားတယ်။ ဆီးဂိမ်းကာလ မှာ သစ်ပင်ခုတ်ဖို့ မီးဖြတ်တာမျိုး၊ မီးလိုင်း ချိန်းတာမျိုးတွေ လုံးဝ မလုပ်ဘူး´´ ဟု အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးရန်လင်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဟော်ကီအားကစား အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးထင်ဇော်ဝင်းက “ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က ဟော်ကီပြိုင်ပွဲလုပ်တာ မီးပျက် သွားတယ်။ မီးစက်မောင်းပေမယ့် ၅ မိနစ်လောက်ကြာမှ မီးပြန်လာတော့ ဟော်ကီကို Score Board မပေါ်ဘဲ ကစားလိုက် ရတယ်။ တတ်နိုင်ရင် မီးပျက်ပြီး ၂ မိနစ်လောက်အတွင်း မီးစက်နှိုး မီးလာအောင် စီစဉ်ထားရမယ်´´ ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကြီးကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
မလေးရှားတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အပါအ၀င် တရားမ၀င် နိုင်ငံခြားသား ၁၅၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရ
အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူရှိ ကာဂျန်းနယ် Puncak Saujana တွင်
အော်ပရာစီ စစ်ဆင်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး
ဦးစီးဌာနနှင့် ဒေသခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံခြားသားများအား
ရှောင်တခင် စစ်ဆေးရာ အထောက် အထား မရှိသော နိုင်ငံခြားသား ၁၅၂
ဦးဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှား ၁၁၀ ဦး ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အမျိုးသား ၂၇
ဦး ၊ မြန်မာ ၁၁ ဦး ၊ နီပေါ ၃ ဦး၊ ပါကစ္စတန် ၁ ဦး ပါဝင်ကြောင်း
ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဦးကပ်စေး၊ ဦးရှံစား၊ ဦးဒိန်းဒေါင်၊ ဦးလူပေါ၊ဦးစိတ်တို နှင့် မျောက်ညို စသောထင်ရှားသည့် ကာတွန်း ဇာတ်ကောင်များ ဖန်တီးသူ ကာတွန်း ဦးအောင်ရှိန် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၂၀ မိနစ် တွင် ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးတွင် လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကွယ်လွန်သူ ၏ ရုပ်အလောင်းကို ရေဝေး အအေးတိုက်တွင် ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့် သောကြာနေ့တွင် သဂြိုလ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
မိုင်းရှူး - တောင်ကြီးလမ်း သုံးရက်ဆက်တိုက် ဓါးပြတိုက်မှုဖြစ်
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းနောင်မြို့နယ်( မိုင်းရှူး - တောင်ကြီးလမ်းမပေါ်) ၌ ဓါးပြတိုက်မှု သုံးရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ များပြောပြချက်အရသိရပါသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၆ - ၂၈ ရက်နေ့အထိ တောင်ကြီး - မိုင်းရှူး လမ်းမပေါ်
ဟဲဆိုင်ရွာနှင့် ဟန်နားကျေးရွာကြား အက်စ်ကွေ့ ခေါ် နေရာ ၌ ဓါးပြသုံး
ယောက်က တူမီးသေနတ်ကိုင်ကာ နေ့စဉ် ဓါးပြတိုက်နေကြောင်း၊
ဗင်ကားများ၊ ဘီအဲမ်ကားများ၊ ဖိုးဝှီးဟိုင်းလက် ကားများအား ဟန့်တား
၍ ဓါးပြတိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ နေ့စဉ်ပိုက်ဆံကျပ်သိန်းချီနှင့် ရွှေဆွဲကြိုးများ၊
လက်စွပ်များ ဓါးပြတိုက်ခံကြောင်း ဒေသခံခရီး သွားများက ပြောပြသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက် ညနေ ၄ နာရီ ခွဲခန့် ဓါးပြတိုက်ခံရသည့် မိုင်းရှူးဒေသခံ တဦးကလည်း ဓါးပြများသည် ကားပေါ် ရှိစား သောက် ဖွယ်ရာများပင်ယူဆောင်သွား ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ဖိုးဝှီးကားပေါ်ပါရှိသူများ ကျပ်ငွေရှစ်သိန်းကျော်နှင့်အတူ (ရွှေဆွဲကြိုး နှစ်ကုံး၊ ပတ္တမြား ဆွဲတီးတလုံး၊ ဆွဲပြားတခု၊ လက်စွပ် တကွင်း) ကျပ်သိန်း ၂၀ ကျော် တန်ဖိုးရှိသည့် လက်ဝတ် ရတနာများလည်းပါသွား ကြောင်းပြောသည်။
“ကျနော်ကလေးကို ကျောင်းသွားပို့ပြီး ပြန်လာတာ။ ပိုက်ဆံမ ကျန်တော့ လို့ သောင်းဂဏန်းလောက်ပဲပါသွားတာ။အဲဒီဓါးပြကခြုံထဲ မှာတော့ ရှိသေးလားမသိဘူး၊ လမ်းပေါ်မှာတော့ သုံးယောက်ဘဲတွေ့တယ်။ တူမီးသေနတ်တွေနဲ့ဘဲ။ နှစ်လုံးပြူး တူမီးသေနတ် အမျိုးအစားလဲပါတယ်။” - မိုင်းရှူးမြို့ခံစိုင်းအေးက ပြောသည်။
ထို့အတူ ကျေးသီးခရီးသည် လဲချားဒေသခံ နန်းမြဆိုသူကလည်း - ဓါးပြတိုက်ခံရပြီးနောက် လမ်းပြင်ကားအပြာစီးနင်းလိုက်ပါလာသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၈-၉ ဦးခန့်တွေ့ဆုံကြောင်း၊ အက်စ်ကွေ့တွင် ဓါးပြတိုက် မှုဖြစ်နေ သည့်အကြောင်း ပြောပြရာတွင် ရဲများကခရီးမဆက်တော့ ဘဲ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့် သွားကြောင်း - ပြောသည်။
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းနောင်မြို့နယ်ခွဲ ရှိ နာမည်ကြီး အက်စ် (S) ကွေ့ တွင် ဓါးပြတိုက် မှု မကြာခဏ ဖြစ်ပွါးခဲ့ပါသည်။ ယမန်နှစ် ကလည်း မြန်မာ စစ်ကြောင်းနှင့် ဓါးပြအဖွဲ့တိုးမိသောကြောင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ
မြန်မာစစ်အရာရှိ တဦးသေ ဆုံးပြီး ရဲဘော်တဦးဒဏ်ရာ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။
ဓါးပြတိုက်မှု မကြာခဏ ဖြစ်ပွားတတ်သည့်အက်စ်ကွေ့ သည် ကျေးသီး အခြေစိုက် ခလရ ၉ နှင့် နီးသကဲ့သို့မိုင်းနောင်မြို့နယ်ခွဲ အခြေ စိုက် အမှတ်(၂) စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲ မှု ဌာနချုပ် နှင့်လည်း ၁၀ မိုင်ခန့်သာဝေးေ ကြာင်းဒေသခံများကပြောသည်။